Ra’iisal-wasaare Rooble oo kormeeray qaar ka mid ah isbitaallada Muqdisho. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisal-wasaare Rooble oo kormeeray qaar ka mid ah isbitaallada Muqdisho.
Ra’iisal-wasaare Rooble oo kormeeray qaar ka mid ah isbitaallada Muqdisho.
Previous articleWasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo maanta shaacisay dad badan oo ka bogsaday COVID19.
Next articleGuddoomiyaha golaha Shacbiga oo ku booqday Isbitaalka Ordagan gabar bukaan ah.